चार नेताले बैठक बहिष्कार गर्दा नेकपामा तरंग : बहाना समय, निशाना अन्तै ! – Sero Fero News
Home/Trending News/चार नेताले बैठक बहिष्कार गर्दा नेकपामा तरंग : बहाना समय, निशाना अन्तै !
चार नेताले बैठक बहिष्कार गर्दा नेकपामा तरंग : बहाना समय, निशाना अन्तै !
December 9, 2018	Trending News, मुख्य समाचार Leaveacomment 63 Views
काठमाडौं – पार्टी सचिवालयको बैठक समयमा शुरू नभएको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बैठक स्थलबाट बाहिरिएपछि नेकपा भित्रको विवाद छताछुल्ल भएको छ ।
शनिवार बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठक बहिष्कार गरेका नेताहरू आफू अपमानित भएको महसुस गरेको भन्दै विवाद सिर्जना गर्ने काम अध्यक्षद्वयबाटै भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।
तल्लो तहसम्म अझै पनि पूर्ण एकता नभएको नेकपामा शीर्ष नेताहरूबीच नै विवाद देखिएपछि कार्यकर्ता अन्यौलमा परेका छन् ।
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकलौटी रूपमा पेलेर अघि बढेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । ९ सदस्यीय सचिवालयमा ४ नेता बाहिरिए पनि बैठक भने बस्यो । सो बैठकले पार्टी कार्यालय धूम्रराहीमा २९ गते दिउँसो स्थायी समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
पौडेलका अनुसार सचिवालयले गरेका पछिल्ला निर्णय जानकारी गराउन तथा पार्टी र सरकारको काम कारवाहीको समीक्षाका लागि बैठक बोलाइएको हो ।
प्रदेशका पदाधिकारी र प्रदेश कमिटी चयनमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै नेकपामा असन्तुष्टि छ । महासचिव पौडेलका अनुसार अध्यक्षद्वय परामर्शमा रहँदा केही मिनेट मात्रै सचिवालयको बैठक ढिलो हुन गएको हो ।
पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ यसलाई समयको ख्याल गर्न सचेत गराउने कामको रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘यो कुनै गुटको पक्षमा गरेको निर्णय नभएर समयलाई ध्यान दिनुपर्छ, पार्टीलाई विधि विधानबाट मात्र चल्ने बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि चालिएको कदम हो,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने ।
तपाईंहरूको यो कदमले कार्यकर्ता र आमजनतामा नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न मद्दत पुर्‍यायो नि ? भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठ थप्छन्, ‘यो पार्टी कार्यकर्ताले पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने विषय हो । मैले नै धेरैपटक समयमा बैठक बस्ने गरौँ भनेर प्रस्ताव लागेको छु, तर अहिलेसम्म त्यो कहिल्यै पालना भएको देखिएन । हिजो हामीले यसविरुद्ध कदम चाल्नैपर्छ भन्ने ठान्यौं र २० मिनेट कुरेर हिड्यौं । यसबाट पूरै देशले सकारात्मक सन्देश पाएको छ ।’
श्रेष्ठले आफूहरू पार्टी एकता सुदृढ गर्न र सरकारलाई सफल बनाउन लागिपरेको भन्दै यसमा पार्टीपंक्ति र कार्यकर्ताले ‘नेतृत्वमा विभाजन’ आएको भन्ने कोणबाट बुझ्न नहुने तर्क गरे ।
‘हामी जसरी पनि पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन र सरकारलाई सफल बनाउन लागिपरेका छौं । त्यसका लागि पनि विधि, विधान र समयको ख्याल गर्नैपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।
बैठक लगत्तै सञ्चारमाध्यमहरूसँग कुराकानी गर्दै महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्षद्वय क्यान्सरपीडित समेत रहेकी उदयपुरकी पूर्व सांसद् मणि खम्बुसँग परामर्शमा रहँदा केही मिनेट ढिला भएको प्रष्टिकरण दिएका थिए । एउटै भवनको वल्लोपल्लो कोठामा हुँदा पनि कुराइयो भनेर बैठक नै छाड्न नमिल्ने उनको जिकिर थियो ।
तर नेता झलनाथ खनाल भने यसबारे आफूहरूलाई सूचना नै नभएको बताउँछन् । अध्यक्षद्वय परामर्शमा रहेको सूचना पाएको भए आफूहरू एक घण्टा पनि कुर्न तयार हुने उनको भनाइ छ ।
खनालले लोकान्तरसँग भने- ‘हामी लगभग २० मिनेटसम्म कुर्यौं, तर न त अध्यक्षहरू आउनुभयो न त हामीलाई अन्य कुनै सूचना नै प्राप्त भयो । यो कदमपछि आगामी बैठकहरू सही समयमा शुरू हुन्छन् भन्ने आशा लिएका छौं ।’
शनिबारको बैठक बहिष्कार गरेपनि आगामी २९ गते हुने स्थायी समिति बैठकमा भाग लिने श्रेष्ठ र खनाल दुवै नेताले बताए ।
बैठक बहिष्कार गर्नुको कारण समयलाई देखाइए पनि यी चारै नेता अध्यक्षद्वयको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेको कहीँबाट छिपेको छैन । यसअघि डा. गोविन्द केसीको अनशनका क्रममा केसीलाई भेटेर नैतिक समर्थन जनाएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले स्पष्टीकरण सोधेपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएका थिए । तर उनको राजीनामा पार्टीबाट स्वीकृत भएन र श्रेष्ठ प्रवक्ताकै भूमिकामा छन् ।
अर्का नेता माधवकुमार नेपालले पनि अध्यक्षद्वयको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् । आफू घाना भ्रमणमा गएका बेला प्रदेश कमिटी पदाधिकारी चुनेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाउँदै अएका छन् ।
झलनाथ खनाल भने पार्टी एकता घोषणा हुँदा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आयोजना गरेको मार्क्सको द्विशतवार्षिकी कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका थिए । खनालले स्वदेश फर्किने क्रममा विमानस्थलबाटै आफूलाई वरीयतामा तल राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनको असन्तुष्टि पनि अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । पार्टी एकताअघि तत्कालीन एमालेमा खनाल माधव नेपालभन्दा माथिल्लो वरीयतामा थिए । नेकपामा दुई अध्यक्षपछिको वरीतामा नेता नेपाल र त्यसपछि मात्र खनाल छन् ।
अर्का नेता वामदेव गौतम भने आफूलाई संसद् प्रवेश गर्न पार्टीले नै असहयोग गरेकोमा असन्तुष्ट छन् । विशेषगरी अध्यक्ष ओलीले नै आफूलाई संसद् बन्न सहयोग नगरेको उनको गुनासो रहने गरेको छ । यद्यपि सार्वजनिक रूपमा अध्यक्षलाई तोकेर गौतमले यस्तो असन्तुष्टि जनाएका भने छैनन् ।
Previous रवीको १२५ रनमा शरदको भैरहवाले लक्ष्य भेट्टायो
Next रामपुरका प्रेमबहादुर नेपाली सिलुवामा मृत फेला